ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस नै बन्छ « Bikas Times
मिति: December 2, 2017
डा. शंशाक कोइराला, महामन्त्री नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला यतिबेला आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई भेट्दैछन् । देशभरका बिभिन्न जिल्लामा पुगेर प्रचार अभियानलाई व्यापक बनाएका उनी नवलपरासीबाट तेस्रो पटक निर्वाचन लड्दै छन् । त्यस क्षेत्रमा उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि हेरिएको छ । निर्वाचनमा व्यस्तरहेका उनीसंग विकास टाइम्स्का सम्पादक शिब लम्सालले भेट गरेर कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको संपादित अंश ।
निर्वाचनको माहोल कस्तो चलिरहेको छ ?
मंसिर २१ गते जनताले निर्णयक भूमिका खेल्नेछन् । यहाँको अवस्था निकै राम्रो छ । यहाँका जनताले नेपाली कांग्रेस चाहेका छन् । जीतका लागि समस्या छैन् ।
अहिले नेपाली जनाताको कांग्रेसप्रतिको उत्साह कस्तो रहेको छ ?
जनताको उत्सुकता, चाहना नेपाली कांग्रेसप्रति निकै रहेको छ । म जहाँ जहाँ पुगे त्यो ठाँउको अवस्था हेर्दा निकै उत्साहजनक छ । म १०–१५ जिल्लामा गए, सबै तिर उत्साह निकै छ ।
यस पटक थप उत्साह भएको हो र ?
अहिलेसम्मको माहोल हेर्दा त्यस्तै लाग्छ । अहिले वाम गठबन्धनका कारण नेपाली जनता त्रसित भएका छन् । साम्यवाद लागु गर्छन कि भन्ने त्रास पनि छ । नेपाली जनता अहिले निकै सचेत भएर नर्वाचनमा भाग लिदैछन् ।
नेपाली राजनीति दुई धुर्वमा बाँडीको छ , यसले दिर्घकालीन रुपमा कस्तो असर पार्ला ?
वाम गठबन्धनपछि हामीले पनि गठबन्धनको आवश्यकता महशुस गर्यौ । तर पार्टीहरुको खुल्ला प्रतिश्पर्धा भने हुनैपर्छ । म पार्टीहरुको यो गठबन्धनमा विश्वास गर्दिन । यो निर्वाचनमा बाध्यता भएका कारण गठबन्धन भएको हो । आगामी दीनमा हुँदैन ।
यो निर्वाचनमा कांग्रेसको एजेन्डा के के छ ?
अहिले कांग्रेसको एजेन्डा भनेको दुई वटा रहेका छन् । संविधान कार्यान्वयन र सम्वृद्व देश निर्माण नै हो । यो मुद्वामा हामी निकै केन्द्रीत भएका छौं । यसबाहेक पनि हामीले विभिन्न एजेन्डा ल्याएका छौं । आगामी १० वर्षमा देश कसरी अघि बडछ भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौं ।
वाम गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई कस्तो असर परयो ?
पहिले त निकै क्षति होला जस्तो लागेको थियो । अहिले जनताको चाहना हेर्दा कांग्रेसलाई मजबुत बनाएको छ । यसले गर्दा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ । अब एब्सुलुट मेजीरीटी कसैको पनि हुँदैन् । तर सबै भन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस नै बन्छ । अब सरकार बनाउने भनेको कांग्रेसले नै हो । अरुपार्टीसँग मिलेर पनि सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ ।
फेरि राजनीति अस्थिरता त हुँदैन नी ?
यो नेतृत्वमा निर्भर गर्छ । आउने समयमा विकासका बाटाहरु खोल्नु पर्छ । २०४८ सालमा गिरीजाप्रसाद कोइरालाले खुल्ला अर्थतन्त्र ल्याउँनु भयो त्यसले झनै बाटो खुला गरेको छ । अब सम्वृद्विको बाटो खोलेर जानु पर्छ । देश विकास गर्नुपर्छ । यो बाटो पकड्यौ भने स्थीरता प्राप्त हन्छ ।
अब एमाले, माओवादीसँग समन्वय गरेर कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ ?
छैन । त्यो सम्भावना निकै न्यून छ । एक पटक चोटा लागेपछि कांग्रेसले वामसँग गठबन्धन गर्दैन ।
प्रचण्ड देउवा दिर्घकालीन गठबन्धन हुन्छ भन्नुन्थ्यो, एकाएक कसरी चुँडीयो ?
यो जवाफ प्रचण्डले दिनु पर्ने हो । त्यो तोडनुको कारण उहाँले भन्नु पर्छ । त्यसमा केही समस्या भयो की भन्नु पर्ने हो । हामीबाट केही मिस्टेक भएको छैन । हामीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएकै हो ।
बिपी कोइरालाको अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने तयारीमा तपाई कति लाग्नु भएको छ ?
अहिले बिपी नभएपनि उहाँले परिकल्पना गरेको समाजवादलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । जनताको अनुहारमा खुसी देख्न, देशमा विकास गर्नका लागि काम गर्ने हो । बिपीले भनेको जस्तो मेलमिलापले नै देश बन्ने हो । त्यसमा पनि जान सकिन्छ । उहाँको आदर्शलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नु नै हाम्रो दायित्व हो ।
कांग्रेसमा न्यायपूर्ण निर्णय भएन भनिन्छ नी ?
त्यो केहीहदसम्म हो । पुराना मान्छेहरुलाई सम्बोधन गर्छुपर्छ । ६० प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका रहेका छन् । युवालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । टिकट वितरण गर्ने सवालमा केही ठाँउमा युवालाई दिने भनिएको थियो, उनीहरुले पाएनन् । बद्री पाण्डेलगायतका व्यक्तिलाई टिकट दिन सकिएन । यस्ता कुराहरु मिलाउनु पर्ने भएको छ ।
नेताहरुले कि सभापति कि महान्त्रीसँग आशा गर्ने हो, तपाई महामन्त्रीको हैसियतले कत्तिका न्याय दिन सक्नु भएको छ ?
केहीहदसम्म न्याय गरेको छु भने केही समयमा चुकेको छु । टिकट दिने सन्दर्भमा चुकेको छु । ७० प्रतिशत न्याय दिएको छु । कांग्रेसमा एक हदसम्म भागबन्डाको राजनीति कायमै छ । यो पनि अन्त्य हुनैपर्छ । यो गर्नैपर्छ । आउने सन्ततीका लागि भागबन्डाको राजनीति अन्त्य गर्नैपर्छ ।
आगामी समयमा पार्टीको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा छलफल हुन थालेको हो ?
यो भनेको कार्यकर्ताले निर्णय गर्ने विषय हो । देउवाजी यो परिस्थितिमा फेरि लडनुहुन्न । रामचन्द्र पौडेलको उमेर ढल्दैछ, नयाँ नेतृत्व आउने छ । मैले पनि पार्टी सभापति हुने मनस्थिती बनाएको छु । त्यसका लागि मैले शेरबहादुर, रामचन्द्रका साथै अन्य सिनियरहरुसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । उहाँहरुको सल्लाहबिना हिँडन सकिन्न । यसका लागि हामी कोइराला परिवार एक ठाँउमा छौं । राजनीति गरेपछि पार्टी सभापति हुने प्रधानमन्त्री हुने सबैको रहरहुन्छ । हामीले पार्टीमा धेरै सुधार ल्याउनु पर्नेछ । चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा धेरैले भावी प्रधानमन्त्री पनि भनेका छन् । दुई पटक जिते यो तेस्रो पटक हो । सबैको आशाहुन्छ प्रधानन्त्री होस भन्ने ।
तपाईको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या के रहेछ ?
यहाँ सुकुम्बासी समस्या मुख्य रहेको छ । नदी कटान र बेरोजगारी मुख्य हुन् । बाटो खानेपानी, अस्पताल शिक्षा लगायतको निकै ठूलो समस्या रहेको छ । मैले यहाँ ठूलो ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना बनाएको छु । पाँच वर्षभित्र अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने योजनामा छु । यो अवधिमा विकास नभएको हैन र द्रुत गतिमा हुन सकेन । नेताले हाँक्नुपर्ने देश कर्मचारीले हाँकेका कारण समस्या भएको छ ।
कम्यूष्टि र लोकतान्त्रीक समूहको धुर्विकरणले नेपाली राजनीति कस्तो मोडतर्फ जाला ?
साम्यवाद शासन लार्गुगछौं भनेर वाम गठबन्धनले भनेका छन त्यो निकै डरलाग्दो विषय हो । दुई तिहाइ ल्याएर संविधान परिवर्तन गर्छौ भनिरहेका छन् । उनीहरुले त अझ राष्ट्रपति शासन लागुगर्ने भनिरहेका छन् । त्यसमा सत्यत पनि देखिएको छ । उहाँहरुले एकीकरणको समयमा पनि एक हुने कुरा गर्नु भएको छ । चुनावसम्म फाइदा भएपनि दिर्घकालीन रुपमा टिक्दैन । कम्यूनिजम भनेको लोप हुँदै गएको छ । यो सुन्दा निकै ठिक लाग्छ, व्यवहारीक पक्ष निकै कमजोर छ ।
तराईका दलहरुसँग कांग्रेसले प्रयाप्त तालमेल गर्न नसकेको हो ?
हो, यसमा केही गम्भिर त्रुटि भएको छ । सिटमा समस्या भएको हो । अन्तिम समयसम्म पनि प्रयास भएको हो । त्यो बिफल भयो । सिट संख्यमा विवाद भएका कारण समस्या भएको हो । कति दिने र कति राख्ने भन्ने विषयमा समस्या भएको हो । मधेसको मुद्वा कांग्रेसले उठाएको हो । कांग्रेस बढी मधेसमा नै छ । माओवादीसँग छोडिनु, मधेसीदलसँग तालमेल नहुने सिटका कारण हो ।